100W Azụmahịa na-adọba ụgbọala n'ọdụ ụgbọ mmiri China Manufacturer
Nkọwa:Ebe a na-ere ahịa na-echekwa ogwe ọkụ,Azụmahịa ndị a na-azụ ahịa,Na-adọba ụgbọala ọkụ
Home > Ngwaahịa > Okwunyere Ogwe Ndị Na-echekwa Ọdụm > Ejiri ụgbọala na-echekwa ọkụ ọkụ > 100W Azụmahịa na-adọba ụgbọala n&#39;ọdụ ụgbọ mmiri
Ihe Nlereanya.: BB-LD-100W-S
EKWU NDỊ NA-ECHIKE: Ụlọ ahịa na- egbuke egbuke na-egbukepụ egbuke egbuke 100W na SMD LED, nnukwu ọkụ 130LM / W na ogologo ndụ. Mpụpụta ọkụ bụ ihe ịtụnanya, na-egbuke egbuke na-egbukepụ egbukepụ ụgbọala mpempe ụgbọala na- egbuke egbuke maka izu 300W HID / HPS, belata ụgwọ ọrụ kọmputa gị ruo na 70% ~ 80%.
Mfe echichi: Ogwe aka, ileghara fitter, trunnion na photocell ngwa nwere ike zụrụ iche iche maka anyị Commercial Dugara osisi Ìhè. Dị mfe ịwụnye ma gbanwee nhọrọ maka oru gị.
EKWỤKWU NDỊ MGBE: Ejiji a na-eme n'oge a na ịkwanyere ígwè ntanetị wetara ebe dị mma maka ikpo ọkụ. Obi dị anyị ezigbo ụtọ, anyị kwadokwara anyị L ed Parking Light maka gị ma ọ bụrụ na ịchọrọ ọkụ ọkụ mpụ ọkụ ọkụ maka ebe a na-adọba ụgbọala, n'okporo ámá, okporo ụzọ, okporo ụzọ, ụlọikpe egwuregwu ma ọ bụ ebe ọzọ dị ukwuu.
Magburu onwe ya mma: anyị L ed adọba ụgbọala na otutu Light fixtures na enweghi nsogbu na nnukwu arụmọrụ Ọkụ ụgbọala, Diana ibe, àgwà dị oke mma na afọ 5.
Super na-egbuke egbuke: anyị L ed N'èzí Area Ìhè nye akwa lumen mmepụta 13000lm, àgwà nke O Ogologo Ugwu Ochie Led na -ewuru nke ọma, ị ga-eju anya ókè ebe mkpuchi dị.
240W Gburugburu ebe a na-ekpo ọkụ ọkụ Fotocell Kpọtụrụ ugbu a
320W 480 Volt Led Poles Lights with Photocell Kpọtụrụ ugbu a
100W Na-echekwa ebe a na-edebe ihe igwefoto Kpọtụrụ ugbu a
150W Dusk to Dawn Led Parking Garage Light Kpọtụrụ ugbu a
320W Jiri Oghere Uhie Azụ Ụgbọ Mmiri na Dawn Kpọtụrụ ugbu a
Ebe a na-ere ahịa na-echekwa ogwe ọkụ Azụmahịa ndị a na-azụ ahịa Na-adọba ụgbọala ọkụ